Fampianarana: nahaliana ny tanora ny « Salon des études Sup’ » | NewsMada
Fampianarana: nahaliana ny tanora ny « Salon des études Sup’ »
Tratra ny tanjona ho an’ny Madajeune, mpikarakara ny hetsika « Salon des études sup’ » andiany faha-15 tetsy Mahamasina ny alakamisy sy ny zoma teo. Marobe ireo tanora nandritra ny roa andron’ny hetsika.
Maherin’ny 60 ireo oniversite miankina sy mahaleo tena nandray anjara. Nanome fahafaham-po ireo tanora tonga teny an-toerana nampahafantatra ny karazana lalam-piofanana misy sy azo atao sy mifandraika amin’ny asa mahavelona eto Madagasikara.
Nisongadina fa mbola mirona any amin’ny asa birao ny ankamaroan’ny tanora malagasy. Vitsy ireo te ho lasa tenknisianina sy mirotsaka an-tsehatra eny ifotony. Vitsy ihany koa ireo mirona amin’ny resaka fampivoarana ny fambolena sy ny fiompiana. Anisan’ny mbola hironan’ny tanora ny fandraharahana, ny fitantanana, ny lalàna…
Saika manana izany tolotra izany ihany koa ireo oniversite rehetra nandray anjara. Na izany aza, misy ihany ireo tanora liana amin’ny resaka fitrandrahana harena an-kibon’ny tany, efa miroborobo lalina eto amintsika. Saika ireo teratany vahiny no manao ity sehatr’asa ity eto amintsika, indrindra ireo injeniera. Mahasarika indrindra ny tanora ny hirona amin’izany.
Afa-po ny mpikarakara, afa-po ny mpitsidika tamin’ity “Salon des etudes sup’” ity. “Tokotaniben’ny tolotra sy ny tinady eo amin’ny fampianarana ambony no natao hifanatonan’ny mpianatra sy ny sekoly”, hoy Andriamahatsangy Lahatra, avy ao amin’ny Madajeune.